IFTIINKACUSUB.COM: Maanta ayaan ogaaday Miyi/Baadiye in aan ku dhashaa inay ilbaxnimo ii ahayd.
Maanta ayaan ogaaday Miyi/Baadiye in aan ku dhashaa inay ilbaxnimo ii ahayd.
Iftiinkacusub.com; Reer Miyi iyo reer Baadiye ayaad tahay ,labadaasi kalmadood haddii la isu kaa raaciyo,xeradaadu cirka weeye,haddi mid ahaan lagu yidhaahdana kan kale wax uu kala maqan yahay ma jiro waa isla halkii uun.
Somalidu haday kuugu yeedhaan ,kuguna halqabsadaan,kalmadaha reer Baadiye ama reer Miyi ayaad tahay,waxa ay aktooda ka dhigan tahay, in ay kuu dhameeyeen kuuna soo koobeen cay tii u danbaysay.
Wali miyaad aragtay, ninkii Miyiga iyo Baadiyaha ku dhashay,oo aad ilbaxnimo iyo tariikh kaa maqan Ilahay ku manaystay ,haddana ka faa'naya,kuna faa'naaya ilbaxnimo iyo xadaarad hoosta ka qaawan oo aanu lahayn.
Maanta,hadda,ee'gadan qoyan, ayaan ogaday in ay fiicnan lahayd,farxadna ay ii noqon lahayd, in aan Miyi ama Baadiye ku dhashaa.Dadka qaar ayaa laga yabaa marka ay qoralkaygan arkaan in ay fahmi wayaan iina garaabi wayaan,walibana ii dareeman in aan ahayn nin ama ruux ay wax ka siyihiin,xaasha far-cidideed ima maqna,aan ahayn in aan tabaayo wax iga maqan oo ah ,xadaarad iyo tariikh aan wax badan ka heli lahaa.
Miyiga ama badiyaha qofba sida uu u yaqanaa,waa goob aan magaalo ahayn magalana aan u dhawayn,waa xarun ama waa nolol leh xadaarad iyo dhaqan ka gooni ah tan magalada.Miyigu waxa uu leeyahay nolol ka gadisan tan magalada oo dhan heerkasta oo ay tahayba.
Miyigu waa goob ay ka dhisan tahay nidaamyo laga yaabo qaarkood in ay ka fiican yihiin kan aynu dawlado la'moodka ku dhisano.Miyigu waxa uu leeyahay kaljar iyo nolol qaabkasta oo noole u baahdo u habaysan.
Anigu Miyiga ama baadiyaha aan ka hadlayaa maaha kan hadda ee reer magaalnimadu jaanjamisay,balse waxa aan ka hadlayaa Miyigii dhaqanka iyo qawaniinta lahaa lagu noolaado;miyiga ama baadiyaha aan jamanaayo ee aan jeclaysanayaa in aan ku noolada maahan kan wakhtigan xaadirka ah fashilka ku dhaw,ee qaatay ,tunkana u ritay ,dhaqankii iyo ilbaxnimadii guracnayd ee magaalooyinka.
Miyigu ama baadiyuhi sidiisaba waxa uu lahaa hab dhaqan isugu jira mid fiican iyo mid aad u liita,balse anigu labadaasi dhaqabna waan jeclaan lahaa in aan wax ka ogaado,waana mida igu kaliftay in aan maanta qoomamaynaayo in noloshayda oo dhanba ay magaalo uun dhinacna u dhaafi la dahay.
In aan dhaqankii iyo xadaradii Miyiga aan wax ka ogadaa waa mid fiican,khasabna maaha haddii aanan ku dhalan in aanan helayn cid aan kala xidhiidho ama wax iiga kordhisa,balse waxa aan arkay kii ku dhashay ee ku noolaa oo ka faanaaya in uu wax iiga sheege xadaradii Dahabiga ahayd ee uu soo maray.
Hadaba aniga oo haysta macalimiin badan oo aan jeclahay in aan wax badan ka faa'idaysto dhaqankii iyo ilbaxnimadii hore ee Miygiga,hadana waan jeclaan lahaa in aan noqdo mid dhaqankasi iyo Ilbaxnuimadaasi soo maray kunasoo barbaaray.